विगतका लाेकप्रिय गेमहरू - नानीबाबु अनलाईन
समयको विकासको साथ, खेल उद्योग पनि द्रुत रूपमा बृद्धि भइरहेको छ। प्रारम्भिक जिओबावाang कार्ड गेम कन्सोलबाट गेम उपकरणहरूको श्रृंखलाको उदय जस्तै कम्प्युटर, स्मार्ट फोन, स्विच, PS4 आदि। विभिन्न प्रकारका ठूला र साना खेलहरू अनन्त रूपमा देखा पर्छन्। आउनुहोस् हामी एक take ० को दशकको पीढीको बाल्यकाल खेलहरू के हो हेरौं!
सुपर मारियो अधिकांश व्यक्तिको बाल्यकालको सबैभन्दा प्रसिद्ध खेलहरू मध्ये एक हो!यो धेरै क्लासिक हो, र कडाईका साथ बोल्दा, यो धुलो हुँदैन, किनकि त्यहाँ अझै धेरै क्लासिक मानिसहरू छन् र यो खेल परिवर्तन गरिरहेका छन्। चित्रकलाको क्लासिक शैली, बाल्यकालको दिउँसोमा, घरभित्र पुरानो इलेक्ट्रिक फ्यान उडिरहेको छ, र सियाओबावाang खेल कन्सोल प्लग इन गरिएको छ। खेल कार्ड, कालो र सेतो टिभी वा कलर टिभीको अगाडि सुपर मारियो खेल्नको लागि एक मित्रलाई खिच्नुहोस्। यो रमाईलो छ, तर दुर्भाग्यवस, जब म ठूलो हुन्छु, धेरै पुरानो समय केवल मिस गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
MapleStory पनि एक कार्ड खेल हो, सुपर मारियो जस्तै धेरै, तर केहि भिन्नताहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो विशेषता यो हो कि यसले ड्रेगनहरू बढाउन सक्दछ। बिभिन्न ड्रेगनहरूको बिभिन्न विशेषताहरू छन्। यो एक धेरै राम्रो खेल हो। के कसैलाई थाहा छ?
यती ब्रदर्स ठूलो खेल होइन, तर यो धेरै क्लासिक हो।कालो खेल्नु पर्ने बाल्यावस्थामा राम्रा साथीहरूसँग खेलहरू खेल्नुमा, खेलले तपाईंलाई धेरै न्यानो भावना दिन्छ।यो आकस्मिक खेलको रूपमा राम्रो छ।
मलाई हेर्न दिनुहोस् कि कति जना मित्रहरूले यस खेलको बारेमा जान्न सक्छन्। खूनी लडाईमा बचपन र साथीहरूको लागि फाइटि। गेम हुनुपर्दछ। खेलमा एक सफलता मोड र फाइटिंग मोड छ। पात्रहरूसँग धेरै फरक सीप प्वाइन्टहरू छन्, जुन धेरै चाखलाग्दो छ।
दोस्रो रोबोट युद्ध”
दोस्रो रोबोट युद्ध पनि एक प्रकारको कार्ड गेम हो, मोबाइल फोन सिम्युलेटर पनि खेल्न सकिन्छ, धेरै खेलाडीहरूले यो खेल खेलेका छैनन्, तर रोबोट युद्ध श्रृंखला पनि खेलेको हुनुपर्छ, त्यस्ता धेरै रोबोट युद्ध खेलहरू धुँवामा छन्, मलाई कोही पनि थाहा छैन, तर स्टीममा नयाँ रोबोट युद्ध खेल छ, यस प्रकारको खेल फेरि देखा पर्‍यो।
“फायर प्रतीक: सीलको तरवार”
धेरै मानिसहरूलाई अग्नि चिन्ह थाहा छ। जे भए पनि, स्विचमा फ्लेम प्रतीकको लोकप्रियता कम छैन, तर यो पुरानो संस्करण लगभग धुलोमा कभर गरिएको छ। क्लासिक लडाई शैली, हतियार मिलान, र केही साधारण रणनीतिहरूको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बिभिन्न पेशा। एक धेरै राम्रो पुरानो खेल।
रातो फोर्ट्रेस जापानी कम्पनी KONAMI द्वारा विकसित एक एक्शन शूटिंग खेल हो। यो सेप्टेम्बर १ 19889मा मुख्य भूमि चीनमा जारी गरिएको थियो। रातो किल्ला, कन्ट्रा, हरित कोर्प्स, र सालोमन सर्पलाई “शीर्ष चार” को रूपमा पनि चिनिन्छ र सम्पूर्णभरि लोकप्रिय छ S० दशक।होईन, s ० को दशक अझै पनी तातो छ, मलाई थाहा छैन कति व्यक्तिले ००० पछि यो पुरानो खेल जान्दछन्।
१ × × १ map नक्शा मिलेर १ × ×× नक्सा समावेश गरी १ 1985 13 मा शुरू भएको ब्याटल सिटी (युद्ध शहर) मा levels 13 स्तरहरू सम्मिलित छन्। इलाकामा brick प्रकारका ईंटा पर्खालहरू, समुद्री पानी, इस्पात प्लेटहरू, ज ,्गल, र फ्लोरहरू सामेल छन्। तपाईले बहुविध प्रकारका खजाना प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। खेल, दुश्मनहरू types प्रकारका आर्मर्ड सवारीहरू, लाइट ट्याks्क, एन्टि-ट्या tank्क गन, र भारी ट्याks्कहरू छन्। त्यहाँ सेटिंग्सहरू छन् जुन क्यानबलले एक अर्कालाई र मित्रवत फायरपावरलाई अफसेट गर्दछ। यो बच्चाको दुई व्यक्तिको लागि हुनुपर्दछ। धेरै व्यक्तिहरूले यो खेलेका छन् ००० सेकेन्ड पछि पनि। क्लासिक पुरानो खेलहरू जुन खेलाइएको छ,
“तीन राज्यको रोमान्स”
रोमान्स अफ थ्री किंगडम डिभोरि World वर्ल्ड २ एक आरपीजी खेल हो जुन क्यापकले विकास गरेको हो। यो खेल १21994 in मा एफसीमा जारी गरिएको थियो। खेल तीन थ्री राज्यको रोमान्स लियु, गुआन र झाhangको कथाको साथ विकसित गरिएको थियो। पृष्ठभूमि को रूप मा।क्लासिक बाल्यकालको शावक कार्ड खेलहरू मध्ये एक, यो खेल बजारमा कमै देखिन्छ, कति व्यक्ति अझै पनि यसको बारेमा थाहा छ?
माथिको दस प्रकारका कारण क्रमबद्ध गरियो। वास्तवमा त्यहाँ दस भन्दा बढी प्रकारहरू छन्, जस्तै कन्ट्रा, किशोर किशोरी म्युट्यान्ट निन्जा कछुए, एफ १ रेसि,, तीन आँखा केटाहरू, अफ-रोड रथहरू, मानव हतियारहरू, गोल्ड डिगरहरू, पोपिए, डबल ड्र्यागन, मेटल स्लग प्रतिक्षा गर्नुहोस्, त्यहाँ धेरै छन्। खेल उद्योगको जोडदार विकासको साथ, यी पुराना खेलहरू बिस्तारै जनताको नजरबाट फीका हुँदै गयो, जसको अनुसरण गर्दै कति व्यक्तिको युवा, आजका पुराना खेलहरू साझा गरिएको छ, यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने, यो समर्थन गर्न संग्रह लाईक गर्न को लागी याद गर्नुहोस्।
आईटि न्युजबाट साभार